Siyaasadda Qarsoonnimada - Aragtida Cradle
Cinwaanka websaydhku waa: https://cradleview.net.
Macluumaadka shakhsiyadeed ee aanu ururineyno iyo sababta aan u soo aruurinno
Xadhig qarsoodi ah oo laga sameeyay ciwaanka emailkaaga (sidoo kale loo yaqaan hash) ayaa laga yaabaa in la siiyo adeega Gravatar si loo eego inaad isticmaalayso. Siyaasadda Khaaska ah ee adeegga Gravatar ayaa laga heli karaa halkan: https://automattic.com/privacy/. Kadib oggolaanshaha faallooyinkaaga, sawirkaaga astaanta guud ayaa loo arki karaa dadweynaha marka loo eego faalladaada.
Haddii aad faallo ku dhaafto bartayada internetka waxaad dooran kartaa inaad keydiso magacaaga, cinwaanka emaylkaaga iyo websaydhka kujira cookies. Kuwani waa ku habboonaantaada si aadan u baahnayn inaad mar kale faahfaahintaada buuxiso markaad ka tagto faallo kale. Kukiyadaani waxay socon doonaan hal sano.
Haddii aad soo booqato boggayaga bogga, waxaan kuu sameyn doonaa cookie ku meel gaar ah si loo ogaado haddii fa'iidadaadu aqbasho koobiyaal. Cookie-yadaas kuma jirto xog shakhsiyeed waana la tuuraa markaad xireyso galkaaga.